shoppingdirect1.com - - နှင့်အတူ 24 ကွန်ပျူတာလင်မယားလက်စွပ်နယူးဖက်ရှင်မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်သံမဏိလက်စွပ် SD24
Home > 1 ကွန်ပျူတာလင်မယားလက်စွပ် AAA + CZ ကျောက်စာနှင့်အတူနယူးဖက်ရှင်မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်သံမဏိလက်စွပ်လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများလည်းညှိုးနွမ်းဘယ်တော့မှမ
1 ကွန်ပျူတာလင်မယားလက်စွပ် AAA + CZ ကျောက်စာနှင့်အတူနယူးဖက်ရှင်မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်သံမဏိလက်စွပ်လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများလည်းညှိုးနွမ်းဘယ်တော့မှမ
ရောင်းဈေး € 25,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 42,00
shoppingdirect24.com --- ETSY.COM အပေါ်ကိုရှေးခယျြထုတ်ကုန်ကိုကြည့်ပါ --- သင့်ရဲ့ဘာသာစကားနှင့်ငွေကြေးကိုကို ရွေးချယ်. : http://lnk.direct/7tz8 --- အခမဲ့ရေကြောင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသာ 25 EURO လှည်းတန်ဖိုးကိုမှ။ --- ထုတ်ကုန်ဓါတ်ပုံများအတွက်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် zoom ကို / မှန်ဘီလူး function ကိုသုံးပါ။ item အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို
1.Item အမျိုးအစား: ရွှေစိန်လက်စွပ်
3.Scene: Romantic ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
4.Gender: အမျိုးသမီးများနေ့ / လူတို့, မိတ်ဆွေတို့ကို
6.Size: အရွယ်အစား 5-8 စိန်နှင့်အတူဖြစ်ပါသည်, 9-13 စိန်မပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။
7.Occasion: မင်္ဂလာဆောင်, ပါတီ, လက်ဆောင်ပေးမယ်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး, နှစ်မြောက်
8.Metals အမျိုးအစား: ရွှေပန်းကန်
9.Package ပါဝငျ: 1 pc Ring ကို
ကျနော်တို့ကတိပေး: ငါတို့သည်မဆိုပြဿနာရှိပါတယ်လျှင်, စတိုးဆိုင် ကျေးဇူးပြု. သွားရောက်ကြည့်ရှု, ကောင်းသောဘဏ်ဍာ it.more ရုံအမိန့်ကိုမစိုးရိမ်ကြသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ဦးစိတ်ကျေနပ်စရာအဖြေကိုပေးပါလိမ့်မယ်။